Umatshini wokususa iinwele weLaser-China abavelisi bokususa iinwele beLaser, abaXhasi
1200W diode laser umatshini ukususwa iinwele sano laser Painless Diode Laser Izinwele Ukususwa
Engenasiphelo 1200W 755 + 808 + 1064nm Diode Laser Ukususwa kweenwele
1200W Amandla aPhakamileyo
I-Bar yaseLaser yaseMelika ehambelanayo
Iwaranti eyi-100 yezigidi
Ingxelo ye-1200w yoVavanyo lwaMandla
Inkqubo yeFriji eNgcamileyo yeFriji
Sano P-808 diode laser umatshini wokususa iinwele 808nm
Iqonga lokususa iinwele elidibanisa ukusebenza kokugqibela kunye nentuthuzelo engenakuthelekiswa nanto. Enkosi kwi-4 cm yayo enkulu2ubungakanani bendawo kunye nenkqubo yokupholisa phambili, unyango ngoku lukhawuleza kakhulu kwaye akukho zintlungu-zibonelela ngesisombululo esiphuculweyo esibalulekileyo kwizigulana kunye neengcali ngokufanayo. Inkqubo ye-P-808 ye-diode laser inyusa izibonelelo zamaza amathathu adityanisiweyo, kunye namava aphuculweyo esigulana kunye nendlela ejolise kushishino, ukudala isisombululo esahlukileyo nesisiphumo esitsha kwihlabathi lokususa iinwele.
laser yokususa iinwele 755 808 1064 umatshini diode
Itekhnoloji yokususa iinwele ye-diode laser isekwe kwi-dynamics ekhethiweyo yokukhanya kunye nobushushu. I-laser ihamba ngomphezulu wolusu ukufikelela kwingcambu yefollicle yeenwele; ukukhanya kunokufunxwa kuze kuguqulwe kubushushu bezinwele zoboya ezonakeleyo, ukuze ilahleko yokwenziwa kwenwele iphinde yenzeke ngaphandle kokwenzakala okujikeleze izicwili. Inika iintlungu ezimbalwa, ukusebenza ngokulula, okhuselekileyo, itekhnoloji yokususa iinwele ngokusisigxina ngoku.
Isaluni yobuhle entsha esisigxina yobuchwephesha 755 808 1064nm ukususwa kweenwele laser 808 diode laser umatshini wokususa iinwele
Inkqubo isebenzisa elona thuba lide lokususa iinwele le-diode ye-808nm ukungena nzulu kwiderm apho ifollicle yeenwele ikhoyo. Kwinkqubo yonyango, uthotho lokuqaqamba okuphantsi, ukuphindaphinda okuphezulu okuphindaphindayo kwonyusa ubushushu kuzo zombini iifollicle zeenwele kunye nezijikelezileyo, izihlunu ezondlayo ziye kwi-45 degrees Celsius. Olu nikezelo lobushushu oluhamba kancinci lusebenzisa ii-chromophores kwizicubu ezijikelezileyo njengeendawo zokugcina ubushushu besikhumba. Oku, kunye namandla obushushu afunxwe ngokuthe ngqo yintsimbi yeenwele, yonakalisa ubu follicle kwaye ithintela ukukhula kwakhona.
Amaza kathathu (755nm / 808nm / 1064nm) umatshini we-diode laser kunye nomatshini wokususa iinwele we-FDA kunye no-CE
I-wavevelths kathathu (755nm / 808nm / 1064nm) umatshini we-diode laser usebenzisa ii-wavevelths ezi-3 ezona zisebenzayo ekususeni iinwele, iithagethi nganye kubume obahlukeneyo ngaphakathi kobuso bezinwele, izakhiwo ngaphakathi kwempukane yeenwele; Iithagethi eziphambili ze-anatomiki ezi-3 zibandakanya i-bulge, ibhalbhu kunye nepapilla.
Iqonga lokususa iinwele elidibanisa ukusebenza kokugqibela kunye nentuthuzelo engenakuthelekiswa nanto. Ngombulelo kubungakanani bayo obukhulu bendawo kunye nenkqubo yokupholisa phambili, unyango ngoku lukhawuleza kakhulu kwaye akukho zintlungu-zibonelela ngesisombululo esiphuculweyo esibalulekileyo kwizigulana neengcali. I-Sano Diode Laser iphakamisa izibonelelo zamaza amathathu adibeneyo, kunye namava aphuculweyo esigulana kunye nendlela ejolise kushishino, ukudala isisombululo esinqabileyo nesisiphumo kwihlabathi lokususa iinwele.
I-P-mix diode laser ukususwa kweenwele kunye nobude obuthathu
Inkqubo ye-P-808, sebenzisa i-laser ekhethekileyo ene-Pulse-Width 808nm ende, inokungena kwi-follicle yeenwele.
Sebenzisa i-theory yokufakwa kokukhanya kokukhetha ukukhanya kunokukhetha ukufudumeza ishafti kunye neenwele, ukongeza ukutshabalalisa ifollicle yeenwele kunye nentlangano yeoksijini ejikeleze umtya weenwele.
Xa iziphumo ze-laser, inkqubo enobuchwephesha bokupholisa, ipholisa ulusu kwaye ikhusele ulusu ekuzingeleni kwaye ifikelele kunyango olukhuselekileyo nolukhuselekileyo.
p-mix diode laser umatshini wokususa iinwele kunye neziphumo zokususwa kweenwele ngokusisigxina
Inkqubo ye-diano ye-Sano Laser isebenzisa i-laser ekhethekileyo ene-3 wavelengths-808nm / 755nm / 1064nm enokungena kwi-follicle yeenwele. Sebenzisa ithiyori yokukhanya yokungenisa ukukhanya, i-laser inokuchongwa ngokukhethekileyo yi-melanin yeenwele kwaye emva koko ifudumeze i-shaft yeenwele kunye nefollicle yeenwele, ukongeza ukutshabalalisa ifollicle yeenwele kunye nentlangano yeoksijini ejikeleze umtya weenwele. Xa iziphumo ze-laser, inkqubo enobuchwephesha bokupholisa, ipholisa ulusu kwaye ikhusele ulusu ekulimaleni kwaye ifikelele kunyango olukhuselekileyo nolukhuselekileyo!
Kwibala elixineneyo leenkqubo zokususa iinwele ezisekwe kumandla, iSano Laser diode laser ime ngaphandle kokhuphiswano ngokunikezela ngetekhnoloji yokusika ukulungiselela unyango olusebenzayo olukhawulezileyo nolungenazintsholongwane.
Umatshini wokuSusa iiNwele ophathwayo we-1200w 808nm
808nm Diode laser umatshini ukususwa iinwele ngokusisigxina ikakhulu ukususwa iinwele zobungcali.
Inkqubo ye-808nm semiconductor laser isebenzisa ilaser esemgangathweni yegolide enobude obungu-808nm. I-laser semiconductor ikhupha amaza okukhanya angaphaya kwe-infrared, anokuthi angene nzulu kwingcambu yoboya bezinwele, afudumeze i-pigment kuwo kwaye awusasaze kuyo yonke ifollicle yeenwele, enokuwutshabalalisa ngokuchanekileyo umtya weenwele ngaphandle kokubangela ukonakala kwizicubu ezikufutshane. Ukususwa kweenwele ngokusisigxina.
Umatshini wokususa iinwele ophathekayo ka-1200w 755 + 808 + 1064
I-P-MIX 755 808 1064nm Umatshini wokususa iinwele we-laser ikakhulu kukususa iinwele zobungcali.
Ukususwa kwamabala amabala, Umatshini wokukhuthaza izihlunu ze-Ems, Umatshini weLaser we-Co2, Shr IPL Khetha, Shr Opt Ipl Ukususwa kweenwele, Ubuhle be-CO2 Laser,